नगरका सबै क्षेत्रमा न्यायको पहुँच पुगेको छ – जानुका पराजुली उपप्रमुख, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका - लोकप्रिय समाचार
नगरका सबै क्षेत्रमा न्यायको पहुँच पुगेको छ – जानुका पराजुली उपप्रमुख, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार by लोकप्रिय समाचार
नगरका सबै क्षेत्रमा न्यायको पहुँच पुगेको बताउनुहुने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको उपप्रमुख जानुका पराजुलीसँग लोकप्रिय नेत्रज्योती सञ्चार समूहले गरेको छोटो कुराकानी –
१) समग्रमा चौतारा नगरपालिकाले स्थानिय जनतालाई न्याय दिने सन्दर्भमा कस्ता खालका मुद्धाहरु वढी आउने गरेका छन् र तिनिहरुको कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
अहिले नेपाल सँघिय सँरचनामा प्रवेश गरिसकेपछाडी तिन तहको सरकारको अभ्यास भईरहेको छ । हामी स्थानिय तहको जनप्रतिनिधी हौ । र अहिले स्थानिय तहले कार्यपालिका , ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गरिराखेको छ । विशेषगरी न्यायपालीका सम्बन्धी काम गर्नचै हाम्रो स्थानिय तहमा न्यायिक समिति भन्ने हुन्छ । त्यो उपप्रमुखको नेतृत्वमा तिन सदस्यीय न्यायिक समिती छ । लगभग न्यायिक समितिले काम गरेको चार वर्ष वितिसकेको छ । चार वर्षको विचमा हामीले थुप्रै न्यायसम्पादन सम्वन्धी काम गरेका छौँ । न्याय सम्पादन सम्बन्धी कामहरु हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र हामीले फौजदारी मुद्धाहरु हेर्दैनौ किनकी त्यो हाम्रो क्षेत्रधिकार भित्रनै छैन । हामीले देवानी प्रकृतिका विवादहरुलाई मेलमिलापद्धारा टुँगो लगाउने र साधरण प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई निर्णय प्रक्रियाद्धारा टुँगो लगाउने गरी हामीले काम गर्ने गरेका छौ । विशेषगरी सम्पत्ती सम्बन्धी, साध सिमाना सम्बन्धी, घरायसी हिँसा , झैझगडा , सम्वन्ध विच्छेद, लेनदेन सम्बन्धी , कुलो सम्बन्धी विवादहरु , बाटो सम्बन्धी सामान्य विवादहरु हामीले हेर्ने गरेका छौ । हामीले नगरका धेरै विवादहरु मेलमिलापको माध्यमद्धारा मिलाएका छौ । यसरी स्थानिय तहमा प्रत्यायोजित न्यायिक सम्वन्धी अधिकारहरुलाई हामीले सही रुपमा सदुपयोग गर्दै न्यायमा सामान्य भन्दा सामान्य मान्छेको पहुँच स्थापित गरेका छौं । र उहाँहरुको अदालत सम्म जाने समय र खर्चलाई बचत गरेका छौ । हाम्रो न्यायीक सम्पादन समितिबाट भएको कामले यहाँका धेरैले राहत पाउनुभएको छ । उहाँहरुले न्याय पाएको अनुभूती हामीले गरेका छौं ।
२) तपाईले समग्र महिलाहरुको अथवा राज्यबाट पछाडी पारिएका वर्ग , जाती, क्षेत्र , लिङ्गको हितका लागी के गरिरहनुभएको छ ?
स्वभाविक रुपमा हो । म यो नगरको उपप्रमुख हुँ र यहाँका समग्र महिलाहरुको प्रतिनिधी पनी हुँ । मैले महिलाहरुको अथवा राज्यबाट पछाडी पारिएका वर्ग, जाती, क्षेत्र , लिङ्गको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छु । उनिहरुको आवाजको लागी मैले आन्दोलनमा हुँदा देखी, सामाजिक आन्दोलनमा हुँदापनी यी वर्गहरुको आवाजलाई उठाईरहेको ब्यक्ती हुँ । सायद मेरो त्यँही कुरालाई र त्यही सक्रियतालाई देखेर नै मलाई आम नगरवासीले विश्वास गर्नुभो, पत्याईदिनुभो र जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित गराउनुभयो । त्यसैले मुख्यतः उहाँहरुकै आवाज र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नेगरी काम गरिरहेको छु । मुख्यगरी चौतारा साँगाचोकगढी नगरभित्र रहेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाँगता भएका ब्यक्तिहरुको हक हितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उहाँहरुको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी वार्षीक निती तथा कार्यक्रमहरु बनाउने गरेका छौं । उहाँहरुको जिविकोपार्जन सुधार , आम्दानी स्तर बृद्धी गर्ने कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छौं । महिलाहरुको लागी स्वरोजगार बनाउने अभियान सञ्चालन गरेका छौं । महिलाहरुलाई एक घर एक उद्यमीको नारा अन्तर्गत हामीले गलैंचा बुनाई तालिम तथा उहाँहरुको मागबमोजिमका कार्यक्रम तथा सिपमुलक तालिमहरु दिएर हामीले स्वरोजगार बनाएका छौं । धैरै महिलाहरु नगरपालीकाबाट तालिम लिएर उद्यमशिल बन्नुभएको छ । त्यसैगरी अपाँगता भएका ब्यक्तीहरुलाई सिपमुलक तालिमहरु दिएर स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छौं । जेष्ठ नागरिकहरुका लागी हामीले वार्षीक रुपमा सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरु राखेका छौ । चौतारामा रहेको बृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न देखी दिएर उहाँहरुको वासस्थान को ब्यवस्थापनको लागी वार्षिक रुपमा बजेट छुट्याउने गरेका छौं । त्यसैगरी हिंसामा परेका महिलाहरुको लागी यसको न्युनिकरणका लागी मदीरापान नियन्त्रणका अभियानहरु पनी सञ्चालन गरेका छौ । महिला समुहहरु गठन गरेर सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छौँ । यसरी महिला , जाति, जनजाती राज्यबाट बहिष्करणमा परेका मान्छेहरुको लागी प्रतिनिधित्व गर्ने र सम्बोधन गर्नेगरी हामीले वार्षीक रुपमा थुप्रै कार्यक्रमहरु गर्ने गरेका छौ ।
३) पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा कस्ता– कस्ता घरेलु समस्याका उजुरीहरु आउने गरेका छन् र यसको समाधानका लागी कस्ता पहलहरु भएका छन् ?
हिंसा सम्बन्धी मुद्धाहरु हामीले थुप्रै हेरेका छौ र यहाँ धेरै मुद्धाहरु आएको पनी छ । कतिपय मुद्धाहरु घरमै मिलाउने कोशीस गर्नुहुन्छ उहाँहरु हामीले चै भन्ने गरेका छौं हिंसा सहेर नवस्नुस । हिंसा कसैलाई पनी गर्न पाईदैन र सहन पनी हुँदैन भनेर हामीले सचेतिकरण गर्ने अभियानहरु जस्तै कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरु , न्याँयमा पहुँच कार्यक्रमहरु बस्तीस्तरमा गएर सञ्चालन गरेका छौ । हिजो कहीं गएर मेरो आवाजको सुनुवाई हुँदैन , मेरो पिडा कसैले बुझ्दैन , सुन्दैन भन्ने एउटा निराश भएर बस्ने महिलाहरु साँच्चै हामी स्थानिय तहसम्म गयौँ भने र त्यहाँको न्यायीक समितिसम्म गयौँ भने न्याय पाईने रछ भन्ने खालको उहाँहरुको चेतना जागृत भएको छ । धेरै महिलाहरु जो वर्षौ देखीबाट पिडीत , घरेलु हिंसा पिडित भएका महिलाहरुले यहाँ आएर न्याँय पाउनुभएको छ । उहाँहरुको घरायसी बाताबरण पछील्लो समय सुध्रिएका उदाहरणहर पनी हामीसँग प्रशस्तै छन् । यसरी हामीले नगरपालिकाको न्यायिक समिती मातहत रहने गरी मेलमिलाप केन्द्रहरु पनी छन् । वडास्तरमा वडा मेलमिलाप केन्द्रहरुमा मेलमिलाप कर्ताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु मार्फत पनी हामीले विवाद समाधानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आईरहेका छौ र न्यायिक समितीबाट पनी त्यो विवद समाधानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आईराखेका छौं । यसरी घरेलु हिंसा पिडित महिलाहरुको विगतको तुलनामा केही कमी भएको छ यद्यपी यो निमिट्यान्न हुने कुरा अथवा अन्त्यनै हुने हुरा चै यो मान्छेलाई अझ धेरै सचेत गर्न बाँकी छ । अझ धेरै मान्छेहरुलाई चाँही परिवर्तन गर्न बाँकी छ । यो अभियान अनन्तकालसम्म चलिरहने कुरा हो । मान्छेलाई सचेत गराउने , मानवअधिकार केहो ? महिलाअखधिकार के हो ? भन्ने विषयमा चाँही सचेत गराउने काम हामी सबै सामाजिक सरोकारवाला अथवा जनप्रतिनिधी, समाजसेवी सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हो । जवसम्म समाजमा शान्ती कायम गर्न सकिदैन , एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्न सकिदैन तबसम्म यो हिंसाको घटनाहरुलाई पुरै अन्त्य गर्न सकिदैन । यो अभियानचाँही हाम्रो नियमित र निरन्तर चलिरहने अभियान हो र हुनुपर्छ ।
४) समग्रमा नगरपालिकाको विकास निर्माणको अबस्था चाँही कस्तो रहेको छ ? यो नगरपालिकामा गाउँगाउँमा सिँहदरबारको नाराले कत्तिको सार्थकता पाएको छ ?
अहिले हामीले सँघिय सँरचनामा नेपाल गैसकेपछी र स्थानिय तहको सरकार बनिसकेपछी जनताहरुले नजिकबाट सेवा सुविधा पाएका छन् । जनताले नजिकबाट सरकारको अनुभुति गर्न पाएका छन् । हिजो एउटा सामान्य मान्छेले साँसद भेट्नलाई अथवा सिँहदरबारको गेटभित्र छिर्नको लागी त्यँहा ठुलै पहुँचको कुरा हुनुपथ्र्यो । गेट पास प्राप्त गर्ने कुरा सामान्य नागरिकले सिँहदरबार प्रवेश पाउन सक्तैनथे । अहिले जनताको आँगनमा सरकार भएको कारणले अहिले सामान्य खालका विकास निर्माणका कुराहरु एक डेढ लाख, दुई लाखका विकास निर्माणका कुराहरु माग्नका लाग्ी उहाँहरु नगरपालिकासम्म आउन सक्नु भाकोछ । वडासम्म आउन सक्ने भाकोछ । विकासको यती धेरै लहर आएको छ । यो चार वर्षको अवधिमा मलाई लाग्छ नगरले ठुलै मुहार फेरेको छ । हिजो भन्नुस न नगरपालिकाको सडकहरु बार्है महिना चल्न सक्ने अबस्था थिएन । हिउँदभरी गाडी गुड्थे भने बर्खाभरी बन्द हुने अबस्था थियो । अहिले नगरपालिकाको केन्द्रदेखी वडा कार्यालयसम्म जोडिने सडकहरु लगभग सबै कालोपत्रै भएका छन् । एकाध बाहेक त्यो पनी अब स्तरोन्नतीका कामहरु भैराखेको छ । एकाध जो कालोपत्रे हुन बाँकी छन् । त्यसैगरी बस्तीस्थरमा गोरेटा बाटाहरु सिँढी बन्ने क्रम सुरु भएको छ । धेरै ठाउँमा सिँढीहरु बनेको छ । त्यस्तै नगरपालीका सुरुमा हाम्रो सेवाप्रवाह गर्ने आफ्नो भवन थिएन , भाँडामा बसनुपर्ने अवस्था थियो । वडा कार्यालयहरु थिएनन् । अहिले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ । त्यसैगरी वडा कार्यालयहरुको आ–आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु भएको छ । त्यसैगरी पर्यटकिय विकासका लागी पूर्वाधारहरुको निर्माण भैराखेको छ । हाम्रो यो बुद्धपार्क जाने सिढी निर्माणको काम भैराखेको छ । त्यहाँ ६७ फिट अग्लो बुद्धको मुर्ती राख्ने कार्यक्रम चलिराखेको छ । लगभग यो वर्ष ८÷९ करोडको एउटा ठुलो योजना सम्पन्न हुँदैछ । नगरपालिकाको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण स्थल साँगाचोकगढी निर्माणको कार्यक्रम अगाढी बढीरहेको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकासका कामहरु यतिधेरै ह्वात्तै वढीरहेका छन् । त्यसैले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरको कुरा छ । २० वर्ष स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधी नहुँदाखेरी भएको विकास र ४ वर्षको अवधीमा जनप्रतिनिधी आईसकेपछी भएको विकास हेर्ने हो भने त्यो आकाश र पातालको अन्तर छ । २० वर्षमा नभएको विकास हामीले चार वर्षको विचमा गरेर देखाएका छौं । अर्कोकुरा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका कार्यहरु , सामुदायिक विद्यालयका गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरु भैराखेका छन् । त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्नेगरी प्रत्येक वडाहरुमा स्वास्थ्य भवनहरु रहेका छन् । साधरण औषधीहरुको ब्यवस्थापन भएको छ । त्यसैगरी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा स्वास्थ्य कर्मीहरुको ब्यवस्थापन गरिएको छ । खानेपानी, सिँचाई, कृषी, पशुका कार्यक्रमहरु लगायतका थुप्रै कार्यक्रहरु अगाडी बढेको छ । त्यसैगरी युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमहरु नगरपालीकाकै तर्फबाट दुई प्रतिशत ब्याजमा निाधितो ऋण प्रवाह गरेका छौं । ५ लाखसम्म यो स्वरोजगार बन्ने युवाहरलाई , कृषी, पशुपालन गर्न चाहने युवाहरुलाई त्यसैगरी महिला उद्यमशिलता र सपिमा आधारित दलित समुदायको ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रहरु पनि अगाढी बढीरहेको छ । हामीले गत वर्ष र यो वर्ष गरेर ८० जना युवाहरुलाई ५ लाखका दरले ऋण प्रवाह गरेर उहाँहर ब्यवसायिक उत्पादनतिर लाग्नुभएको छ । यी लगायत थुप्रै रचनात्मक र सृजनात्मक कार्यक्रमहर हामीले अगाढी बढाएका छौं । यो चाँही स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधी आईसकेपछी यहाँको आफ्नो विकास आफ्नो मौलिकतामा रहेर , एहाँको सापेक्षतामा आधारित रहेर ऐन कानुनहरु निर्माण गरेर नयाँ ढँगले विकासका कार्यक्रमहरु अगाढी बढाएका छौं ।
५) अन्तमा यहाँको भन्नै पर्ने केही कुरा थियो की ?
यहाँसम्म आउनुभयो, कुराकानी गर्ने मौका पाईयो , यहाँहरुलाई धन्यवाद । धेरै मान्छेहरुका विचमा हाम्रो कुरा जाओस । यही भन्न चाहन्छु ।
Prevपूर्वमन्त्री दुलालद्धारा ईन्द्रावती गाउँपालिकामा खेल मैदानको उद्घाटन
Nextभाइटीकाको उत्तम साइत ११ बजेर २ मिनेटमा